किन घुस खुवाएका थिए राजा महेन्द्रले ! « News of Nepal
किन घुस खुवाएका थिए राजा महेन्द्रले !
काठमाडौं । राजा महेन्द्र जनताका गुनासा एवं समस्या सुन्न र बुझ्न कहिलेकाहीँ आफैँ पनि सडकमा निस्किन्थे । प्रशासनिक निकाय र कर्मचारीले जनतालाई दुस्ख दिएको उनलाई पटक्कै मन पर्दैनथ्यो । विसं २०१९ भदौ महिनाको कुरा हो । म राजदरबारको संवाद सचिवालयमा काम गर्थें । कार्यालयका हाकिम आफू नजिकका मानिसहरूलाई सतर्क रहन नेवारी भाषामा खासखुस गरिरहेका थिए । आफू हाकिमको नजिकको मानिस परिएन, फेरि मलाई नेवारी भाषा बोल्न आउँदैनथ्यो, बुझ्न पनि त्यति राम्रोसँग बुझ्दिनथेँ । त्यस दिन डराएको र बडो अनुशासित ढंगले कर्मचारीहरू आ–आफ्नो काममा खटिएका थिए । वास्तवमा अघिल्लो दिनको राजा महेन्द्रको कदमले उनीहरूलाई झस्काएको रहेछ ।
ठोरीलाई प्रदेश ३ मा गाँभ्ने बिषयमा
आन्तरिक स्रोत बृद्धि र यात्रा सहज